လူနှစ်ဦးကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သူဟုဆိုသူ၏ အမှုတွင် တရားလိုပြသက်သေ ၁၈ ဦး စစ်ဆေးထားပြီး ကျ - Yangon Media Group
လူနှစ်ဦးကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သူဟုဆိုသူ၏ အမှုတွင် တရားလိုပြသက်သေ ၁၈ ဦး စစ်ဆေးထားပြီး ကျ
မန္တ လေးမြို့တွင် လူနှစ်ဦးကိုသေနတ် ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သူဟုဆိုသူ ခွန်ကောလားအမှုတွင် တရားလိုအပါအဝင် လိုပြသက်သေ ၂ဝ ဦးကို တင်သွင်းထားရာ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက်ရုံးချိန် အထိ ၁၈ ဦး စစ်ဆေးထားပြီး နှစ်ဦးသာကျန်ရှိကြောင်း မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးမှသိရသည်။ ”ဒီနေ့ရုံးချိန်းမှာ တရားလိုပြသက်သေ ၁၈ ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့ ဒုရဲအုပ်သောင်းစန်းညွှန့်ကို စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ နောက်တစ်ပတ်ရုံးချိန်းမှာလည်း တရားလိုပြသက်သေ တွေဖြစ်တဲ့ အမှုစစ်နဲ့ မှုခင်းဆရာ ဝန်ကြီးတို့ကို ထပ်မံစစ်ဆေးသွားမှာပါ”ဟု ခရိုင်တရားရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက် ရုံးချိန်းတွင် တရားလိုအပါအဝင် လိုပြသက်သေ ၂ဝ ဦးအနက် လိုပြသက် သေ ၁၈ ဦးမြောက်ဖြစ်သည့် အခင်းဖြစ်ရပ်တွင် ရှာဖွေရေးရဲအရာ ရှိအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူ တရားလိုပြသက် သေ ဒုရဲအုပ်သောင်းစန်းညွှန့်ကို စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ”ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးနေတာ တ ရားလိုအပါအဝင် လိုပြသက်သေ ၁၈ ဦးအထိ စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ နှစ်ဦးပဲကျန်တယ်။ အမှုစစ်ရဲနဲ့ မှုခင်းဆရာဝန်ကြီးပါ။ အဲဒါပြီးရင်တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရှေ့နေလျှောက်လဲချက်တွေနဲ့အတူ စွဲဆိုထားတဲ့ပုဒ်မ တွေသင့်၊ မသင့် စွဲချက်အမိန့်ချသွားမှာပါ” ဟု ခွန်ကောလားဘက်မှ ရှေ့နေအဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးလင်းထင်က ပြောကြားသည်။ နောက်တစ်ပတ်ရုံးချိန်းကို ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်သို့ ထပ်မံချိန်းဆိုခဲ့ပြီး ကျန်နှစ်ဦးဖြစ်သော မှုခင်း ဆရာဝန်နှင့် အမှုစစ်ရဲအရာရှိတို့ကို ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့ရိုးရာ စဉ့်အိုး၊ စဉ့်ထည်နှင့် ပုဂံဆီထီး ပွဲတော်ကို ပြည်သူ့ရင်ပြင်၌ ဆယ်ရက်တိုင် ကျင?
စီမံကိန်းများအား လက်သင့်သူမှ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားမှုမျိုး မဖြစ်စေရေးအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာစွ??